15 Nzira dzekukudziridza Yako Email Kushambadzira Chinyorwa | Martech Zone
NeChishanu, Gumiguru 18, 2013 China, Gumiguru 17, 2013 Douglas Karr
Kukura, kukura, kukura… munhu wese arikutsvaga kuti awane mafeni matsva, vateveri vatsva, vashanyi vatsva, vatsva .. vatsva .. vatsva. Ko zvakadii nevashanyi vako varipo? Chii chauri kuita kunatsiridza mukana wekuvatyaira padhuze nekuita bhizinesi newe? Tazvikanganisa isu pachedu… tichitsvaga kutsvaga kuri nani, kukwidziridzwa kwakawanda, kuwedzerwa kwevanhu munharaunda. Mhedzisiro yacho yaigara iri yakawanda vashanyi kusaiti asi kwete hazvo yakawanda mari pasi pemvura. Kukura yako email list inofanirwa kuve zano rekutanga rako repamhepo zano.
Mumakore mashoma apfuura, tarisiro yedu yakatendeuka kubva kuvateveri nevateveri uye yatamira kumasvikiro - kunyanya kushambadzira email. Chinyorwa chedu chinoramba chichikura uye chiri pa vanoremekedzwa zviuru zana. Zvakatitorera makore gumi kuti tisvike ipapo asi, pasina mubvunzo, ndiyo mari yakanaka kwazvo yati tamboita. Kana ini ndikatumira email, inozoshanduka yakananga mari kwatiri kana kunanga kunanga kumakambani atinokurukura. Munguva pfupi yapfuura, Shel Israel naRobert Scoble vakanditenda nespiki yavakaona mukutengesa kwavo mabhuku pakabuda tsamba yedu yevhiki.
@douglaskarr Tiri kuona uptick mukutengesa, Doug. Thx kubva @scobleizer Neniwo.
- israel israel (@shelisrael) October 15, 2013
Kukura yako email list zvakasiyana zvakanyanya nekuwedzera mafeni kana vateveri. Kuve nemushanyi kunopa iwe kunanga kupinda kune yavo inbox ndicho chiratidzo chikuru chekuvimba. Iko kuvimba kusingafanirwe kushungurudzwa, asi zvirokwazvo kunofanirwa kuchengetwa. Kana iwe uri kushanda nesimba kuunza vanhu kune yako saiti uye iwe usina nzira yekunyorera, iwe uri kungosiya mari kubva patafura kukambani yako. Kana vanhu vadzokera kune yako saiti kakawanda, vanozonyorera kana vachifunga kuti pane kukosha mukunyorera.
Kukura yako email list inodawo kushanda nesimba. Email vanopa sevhisi varikuita zvisina musoro mukubata nemakambani anokura zvinyorwa zvavo nekukurumidza nekutya kukuvadza kwavo kwese kuburitswa. Isu tanga tiri kuhondo nevatengesi vaviri nekuti vaida kudzikisira kugona kwedu kuwedzera kune edu mazita. Ivo vanofungidzira kuti uri spammer kana iwe uchinge uchinge uchipa vashoma zviuru vanyoreri - kwete kuti iwe waingova neinopinda-mukati pawebhu webhu yauri kuwedzera.
Heano akati wandei ezvinyorwa-kuvaka uye kuchengetedza pfungwa kubva GetResponse izvo zvinokubatsira iwe kuwana mhinduro dzakanakisa kubva kune ako ese email mabasa ekushambadzira. GetResponse ine 15% yeupenyu dhisikaundi kana ukasaina nemubatanidzwa wedu. Ivo vane mazana emhando dzakanaka templates uye dombo solid interface izvo zviri nyore kuti chero munhu ashandise.
Ipa Kukosha - Svondo rega rega, isu tinogovana yedu yazvino zvinyorwa uye meseji yakasarudzika kune vatinyoreri. Dzimwe nguva kuderedzwa, dzimwe nguva ingoriwo mamwe mazano akasimba ayo vateereri vedu vanogona kushandisa. Chinangwa chedu ndechekuti wese anonyorera anowana chimwe chinhu chakakosha mune yega email yatinotumira.
Mafomu ekunyorera - Hazvina kunaka, asi kudonhedza kwedu pane yedu saiti kunotitorera isu vanopfuura zana nevashanu vanyoreri pamwedzi! Isu zvakare tine Nyorera peji. Isu takaedza zvakare kubuda mafomu kumusoro pakati pechidzitiro uye takave nemhedzisiro - asi ini ndichiri paruzhowa zvekukanganisa kudaro.
Zvemagariro Sign-Ups - Wedzera fomu yekusaina kune yako Facebook peji uye upe vateveri vako uye vateveri mukana wekusaina wega kamwechete mune imwe nguva. Isu tinoedza kuisundira kunze uko kanenge kamwe chete pamwedzi.
Ita kuti ive Nyore - Usabvunze toni yeminda ... email kero uye zita ndiko kutanga kukuru. Kana vanhu vasarudza kupinda mune zvimwe zvinopihwa unogona kukumbira rumwe ruzivo. Yako email kusaina-kumusoro hakuna kufanana nemumwe munhu ari kutsvaga kuita bhizinesi newe, ivo vari kungoita zvishoma kudzika newe. Usavatyisa!
mimwe - Rega vanhu vaone muenzaniso wetsamba yako! Isu tinowanzo kushambadzira chinongedzo kune yedu yekupedzisira tsamba yekutsikisa kana tichimanikidza vanhu kuti vanyore kuburikidza nesocial media. Kana vachizviona, vanoziva zvekutarisira uye vanosarudza kupinda.
Archive - Kuva neiraibhurari yepamhepo yematsamba akapfuura uye zvinyorwa zvese zvinonakidza uye zvinobatsira kune vashanyi uye kunovaka kutendeseka kwako sechiremera. Uye zvakare, kana zvinyorwa zvako zvakanyorwa nemaitiro akanaka eSEO mupfungwa, anogona kuwedzera traffic kune yako webhusaiti kuburikidza nekumisikidzwa kwekutsvaga injini chinzvimbo.
Iva nechipo - Kana mumwe wevatsigiri vedu ane dhisikaundi kana kupa, isu tinozoishandisa kukwezva vanhu kuti vapinde mutsamba yedu inotevera kuti vashandise mukana uyu. Kupa mabhenefiti aya kuchaita kuti vanyoreri vako vapindewo mukati!
Shoko reMuromo - ipa chinongedzo muemail yako uko vanyoreri vako vanogona kugovana tsamba yako nenetwork. Izwi remuromo inzira ine simba yekuwedzera vanyoreri!
Goverana Zvemukati Zvako - kugovana zvemukati zvako nezvimwe zvitoro inzira yakanaka yekukwezva vateereri vavo mune rako rezita rekushambadzira email Vafudzi vanogara vachitsvaga kuti vagovane zvemukati zvemukati - ipa yako kure uye uve navo vangopa chinyoreso chinongedzo uko vanhu vanogona kusaina zvimwe!
Nyorera - kuva nebhokisi rekunyora hakusi kungokosha pane yako saiti, zvinonyanya kukosha muemail yako sezvainoendeswa kune vamwe. Ive neshuwa yekuve nekusaina bhatani mune yega tsamba tsamba inoenda kunze!
Chinja Zvimwe - Kana vanhu vakasaina peji rekumhara, wedzera komendi, kana kuita newe pese pese pane yako saiti, iwe unopa nzira yekusarudza-mukati kune yako email kushambadzira runyorwa? Unofanira!
Testimonials - Sanganisira zvipupuriro pane yako kunyorera uye kusvina mapeji. Izvi zvakakosha. Isa chimwe kana zviviri zvipupuriro zvine simba kubva kune vatengi vanogutsikana pane yako squeeze peji Kuti uwedzere kuwedzera kutendeka, tora mvumo yekushandisa chaiyo vatengi mazita, nzvimbo uye / kana maurls (Usashandise 'Bob K, FL').
Blog nechitendero - Kublogga inzira huru yekutaurirana netarisiro uye vangangove vatengi, uye inogadzira yakanaka synergy neye email kushambadzira. Ive neshuwa yekuisa yako tsamba yekutsikisa-kumusoro fomu pane yega yega peji reblog rako.
Zano guru # 15 rave riri mutambi wedu mukuru. Shanda nemamwe masangano ku ipa kunyorera kwako. Kana isu tichishanda pane webinar nemutengi, isu tinopa kunyoreswa panguva yekunyora. Kana isu tichitaura pachiitiko, tinopa vanhu mukana wekusaina takananga mumasiraidhi edu. Isu tinotopa iko kugona kunyorera kunyorera kwako neSMS - ndiyo nzira yakanaka yekuita kuti vanhu vasarudze mukati!
Tags: email vabhadharikukura kushambadzira emailrondedzero yekukurakukura runyorwa runyorwakura runyorwa rwako
Idzo Nhema Nomwe dzeEndaneti Kushambadzira
Mutsananguri Kugadzirwa kweVhidhiyo
Jan 6, 2014 pa 3: 02 AM
email kushambadzira ndiyo imwe yenzira yekuita kushambadzira yakananga uye kuunganidza tarisiro nevatengi pasi rese. Iyi inzira inoshanda yekuwedzera musika wako
Kukadzi 1, 2014 na3: 30 PM
Isu takaedza zvakare kubuda mafomu kumusoro pakati pechidzitiro uye takaita
mibairo mikuru - asi ini ndichiri paruzhowa pamusoro pekukanganisa kudaro.